Iphethini yeDonga le3D
I-jet yamanzi kaMoses
Yintoni i ...
Njengoko sonke sisazi, imabhile ...
Izibonelelo zomar ...
Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ...
Ukusetyenziswa kwendawo ...
Njengoko sonke sisazi, imarble yimveliso elungileyo, kwaye ke iintsapho ezininzi zisebenzisa i-marble ekuhombiseni kwazo, kwaye i-marble ine-marble yendalo kunye ne-faux marble. Kwaye nokuba yimarble eyenziweyo okanye imarble yendalo inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga. Intshayelelo Marble ezingezizo i ...
Ngakumbi nangakumbi abantu bakhetha ukusebenzisa imiphezulu yeetafile zemabhile ngenxa yokubonakala kwayo okuhle kunye neempawu ezintle. Okokuqala, ubulukhuni obuphezulu, akukho lula ukuba deformation.Marble yendalo kukudlula iminyaka emininzi ukuba yenze ngokwendalo, ke ngoku iyafana ngokufanayo kubume bayo. Kwaye ukwandiswa komgama ...
Ukusetyenziswa kwemathiriyeli yasemajukujukwini kuhlala kuvelisa okutsha, kwaye izinto zokwakha ezahlukeneyo ziye zangena ngokuthe ngcembe kumbono wethu. Umtsalane wemabhile awuphelanga ukusukela kumaxesha amandulo. Imarble yomoya ococekileyo uhombise, njengobugcisa bokuba indalo iba, inokudibanisa kwi ...
ngomphathi ku 19-09-24
I-Xiamen Morningstar Stone Co., LTD yasekwa nge-23 ka-Novemba ngo-2017 kwaye yabhaliswa eXiamen, isixeko esihle sesiqithi, ikakhulu sizibandakanya kuzo zonke iintlobo zemarble zanamhlanje, igranite, iikholamu ezimilise okhethekileyo, njl. .